सुवास नेम्वाङको प्रतिक्रिया : मैले प्रधानमन्त्रीलाई जे कुरा भनेको थिएँ, त्यो स्थापित भएको छ
नेपाल लाइभ बुधबार, फागुन १२, २०७७, १०:३५
काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयका विषयमा संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपा नेता नेम्वाङलाई फैसला आएको भोलिपल्ट नेपाल लाइभले प्रतिक्रिया लिएको छ।
ती प्रश्नको उत्तरमा उनले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भनेकै कुरा फैसलाबाट स्थापित भएको बताएका छन्। साथै राजनीतिक विवाद नटुंगिएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल लाइभकर्मी किशोर दहालका दुई प्रश्न र नेम्वाङको उत्तर :
फैसला आएको भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिने भन्नुभएको थियो। तपाईंको त्यो प्रतिक्रिया के हो?
हामीले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको आधिकारिक व्याख्याता भनेका छौं। अदालतले यसलाई व्याख्या गर्दै टुंगोमा पुर्‍याएको छ। अदालतले कतिपय राजनीतिक विषयका विवाद टुंग्याएन, अल्झियो र बल्झियो भनेर पनि टिप्पणी हुन थालेका छन्। म यता लाग्दिनँ। मुख्यत: सम्मानित अदालतले फैसला गरेको छ। संसद् विघटनलाई बदर गरेको छ। त्यो अदालतको फैसलालाई मान्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा अर्को विकल्प छैन।
तपाईंले यत्ति कुरा बेलामा नबोलिदिँदा छविमा दाग लाग्यो भन्नेहरु छन् नि त ?
प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने- आन्दोलनको टुप्पामा बस्नेलाई दु:ख, कस्ट के हो थाहा हुँदैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई लक्षित गर्दै आन्दोलनको टुप्पामा बस्नेला... बुधबार, वैशाख १, २०७८
सत्ता, स्वार्थ र भागबन्डाको लुछाचुढिले मुलुक अस्थिर : कमल थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले कांग्रेस र कम्युनिस्ट असफल साबित भएको भन्दै सत्ता,स्वार्थ र भागबन्डाको लुछाचुढिका... बुधबार, वैशाख १, २०७८